Maxaa sababay Xilka qaadista wasiir Abgaal iyo Taliye Xiirane,Ma jiraa heshiis Malayin doolar ah oo uu saxiixay Abgaal ,Akhriso warbxin xasaasi ah. |
Maxaa sababay Xilka qaadista wasiir Abgaal iyo Taliye Xiirane,Ma jiraa heshiis Malayin doolar ah oo uu saxiixay Abgaal ,Akhriso warbxin xasaasi ah.
Madaxweyne Siilaanyo Digreeto uu xalay soo saaray waxa uu xilkii ay qaranka u hayeen ka xayuubiyay Wasiirkii Boosaha iyo Isgaadhsiinta Maxamad Jaamac Abgaal iyo Taliyihii Ciidanka Badda Maxamad Xuseen Xiirane ,Hadaba wararka ilaa hada soo baxaya ayaa sheegaya in sababta xil kaqaadistoodu ay la xidhiidho ka dib markii ay labadooduba diideen inay joojiyaan oo badana ka saaraan xadhig fibre optic cable ah oo ay koox ganacsato ahi ka soo jiiteen dalka Cumaan isla markaana uu carabkii keebal-kaasi soo gaadhay magalada xeebta ku taala ee Berbera iyadoo uu dalka hore uga jiray keeble dhulka la soo mariyey(Somcable) oo laga soo jiiday Jibuuti kaasoo uu leeyahay ganacsade Maxamad Aw Siciid.
Siday wararku nagu soo gaadhayaan keebalkan cusub oo uu rukhsaddiisa bixiyey wasiirka Isgaadhsiinta ee shaqada laga caydhiyey M J Abgaal ayaa waxa ku shuraakoobay shirkadaha Telsom(Somaliland),Golis(Puntland),Ethopian Telcom iyo Shirkad Cumaan laga leeyahay.
Imaanshaha xadhigan cusub ayaa waxa uu jabinyaa heshiis hore xukuumada Somaliland 2011 ula gashay ganacsade Maxamed Aw Siciid kasoo dhigayay in mudo 25 sano ah aan dalka la keeni karin xadhko kale oo Fiber Optic ah iyadoo horena xukuumadu u joojisay xadhig kale oo ay keeni lahaayeen shirkada Telesom kaasoo uu Qaybta ugu badan kulaha ninka iska leh shirkada Hormuud Telecom isla markaana qaybta ugu badan kuleh shirkadaha Telesom (Somaliland) iyo Golis (Puntland) ee Axmed Nuur Jimcaale.
Hindisaha keenista keebalkan ayaanay ka hadhin shirkada Telesom waxanay dhawaan heshiis la galeen shirkada Ethio Telecom iyo Shirkad laga leeyahay wadanka Cumaan.
Halkan ka akhriso warbixinta heshiiska Sadex geesoodka ah oo ka dhacay wadanka Cumaan oo ay daabacday Telefishanka caanka ah ee CNN.
Hadaba keenista xadhigan Fiber Optiga ah oo dulmi wayn ku ah ganacsade Maxamed Awsiciid oo Malaayiin doolar ku bixiyay keenista Fiberkii uhoreeyay dalka ,ayaa la sheegay in madaxweyne Siilaanyo aad uga cadhooday isla markaana amar ku siiyay Wasiirka Boostada iyo Taliyaha Badda inay joojiyaan .Taasoo ugu danbayna sababtay in uu xilka ka qaado labadoodaba.
Sidoo kale asbaabaha uu Garyaqaankii Guud ee dawladdu isku casilay dhawr cisho ka hor ayaa lagu xidhiidhinaya Keebal cusub iyo muran ka dhashay,Waxa la saadaalinayaa in arinta keebalka cusub ay duufaanno xoog leh kiciso iyadoo khalkhal siyaasadeed iyo mid amniba keeni karta.
waxii warar ah ee kasoo kordha isha ku hay Shabakada Gabileynews Network.